Izitayela zezinwele ezimfushane ezi-5 zokuthunga ezimfushane – SL Raw Virgin Hair LLC.
Izitayela zezinwele ezimfushane ezi-5 zokuthunga ezimfushane
Ufuna ukwenza izinwele ezimfushane ehlobo kodwa awufuni ukugunda izinwele zakho? Nazi iziphakamiso ezisheshayo zokulukwa okuthungayo ongazidlala kuleli hlobo.
Ubuhle ukuthi uzovikela izinwele zakho zemvelo, ukulimala kwemikhawulo yokuthunga, futhi uthola ukuzijabulisa ngokunyakazisa lobo bude bufushane ihlobo lonke. Sincoma ukuthi uzame lezi zitayela nge-100% yokuluka izinwele ezintombini ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu. Zizohlala isikhathi eside futhi zikuvumela ukuthi unakekele futhi wenze isitayela sakho sibe ngcono.
Ngakho-ke, nakhu ukukhetha kwethu okungu-5 okuphezulu kwehlobo.
1. Ikhanda lika-Kelly elisikiwe lokuthunga-ngaphakathi
Isitayela sezinwele @razorchicofatlantasalon
e-Razor Chic yase-Atlanta Salon
Enye yezintandokazi zethu i-Kelly Cut. Eqanjwe umlungisi wezinwele ophambili @Najaonhair – oqanjwe ngokufanelekile Kelly’s cut. I-Kelly Cut has ingagqokwa njengokweluka okusheshayo noma ukuthunga ngaphakathi kodwa idume kwabesifazane abanezinwele zangempela abanezinwele ezikhululekile. Imfishane, futhi iyisikiwe esiyizingqimba ezincipha ngemuva, cishe njengomsila. Ungayenza ngomsila noma ngaphandle kwayo.
Izame ngenye ye-SL Raw weave yethu bese usimake #MySlrawvirginhair ku-IG #KellyCut #Kellycuchallenge.
2. Izinwele ze-razor ezisikiwe ze-bob zokuthunga ngaphakathi
Enye yezinwele zethu esizithandayo zokuthunga ezimfushane yi-razor cut bob. Lesi ngesinye sezitayela zobuchwepheshe. Kuye ngemivimbo ye-razor ungathola insimu eneziqu, noma insimu enezingqimba noma umugqa ongenalutho. Bese udlulela ngesikelo ukuze ubukeke kahle ngokubuthuntu ukuze ucwenge isiphetho se-bob.
Yiba nesibindi ngezinwele zakho zokuthunga ehlobo.
3. I-lob isike izitayela zezinwele zokuthunga
Umlungisa izinwele @my_heavelyhair
esaluni yengilazi yokubuka & nendawo yokuphuzela utshwala
Guqula ukubukeka kwakho ngokusikwa kwe-Lob. Lena i-bob ende - njenge-bob efika ehlombe. Ungayitayela ngengxenye emaphakathi ehlabayo noma ingxenye eseceleni enesibindi njengengxenye yesitayela se-bob esinama-engeli amade. Ngezinwele ezimsulwa ezingu-100%, ungathola ukubukeka kokugcina okuhle ngale ndlela yokuthunga.
4. Izinwele zezinwele zokuluka ezigoqene ezifika ehlombe
Ayiyinde kakhulu, ayimfushane kakhulu – ubude obulungile nje. Leyo yi-curly ehlombe-length-length-length-in weave. Unamathuba angapheli okwenza isitayela futhi ube nobuciko ngezinwele zakho ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi kushisa kakhulu. Yinde ngokwanele ukwenza izitayela eziningi futhi imfushane ngokwanele ukuthi ngeke ikucindezele.
5. Izitayela zezinwele ezithungelwa ngaphakathi ze-shag
Ikhredithi yesithombe: @Jessealexandre
Ukuhlanganisa uhlu lwethu olu-5 olufushane lwe-weave i-shag engcolile kodwa enhle. Njengenye i-hairstyle ye-weave esheshayo, iphinde ilungele ukubukeka kwakho kwasehlobo. Uzoyithanda indlela lesi sitayela esifaka ngayo ubuso bakho nezihlathi zakho. I-hairstyle emfushane ye-shag ingenziwa ngezindlela ezihlukahlukene, kusukela ekusikeni kohlobo lwe-pixie kuya ekubukeni okuhle okugqinsiwe noma okupholishiwe. Lokho kuguquguquka.
Thola lokho kubukeka okufushane, okuhehayo, nokunezithunga ze-shag.
Manje, njengoba usuzazi izitayela zezinwele zokuluka ezimfushane ezidumile, uzokhetha yiphi ehlobo? Izitayela zezinwele ezicwebezelayo nezinhle ezibude behlombe noma ama-chic nama-sassy okuthunga amafushane?
Uma ususithathile isinqumo, dlulela ku-SL Raw Virgin Hair Collection bese ukhetha umngane wakho omkhulu olandelayo (owaziwa ngokuthi yi-sew-in weave) yakho ihlobo.